Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Gudoomiye Shariif Xasan oo ciyaaraya Kaarto Culus oo Siyaasadeed (Warbixin Xasaasi ah) - iftineducation.com
Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Gudoomiye Shariif Xasan oo ciyaaraya Kaarto Culus oo Siyaasadeed (Warbixin Xasaasi ah)
aadan21 / August 6, 2012
iftineducation.com – Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Saaxiibkiis Siyaasada ku kala gadisan yihiin Gudoomiye Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markaan wada jilitaanka siyaasad farsameesan ee ku dagaalamayaan labada Nin taa oo hada qaarkood ay soo banaan baxeen.
Shariif Xasan marka loo eego Madaxweyne Shariif waa kaga qatarsan yahay qorshayaasha siyaasadeed ee la ciyaaro iyo xarig jiidka, iyadoodan Shariif Xasan lagu tilmaamo Jilaa Siyaasadeed hadana aamusnaan badan hoostana ka maleega qorshayaal isaga u gaar ah.
Labada Shariif hada waxa ay u Sharxanyihiin Doorashada Madaxweynanimo oo loo calaamadeeyay in ay dhacdo 20-Agoust oo maalmo kooban naga xigaan, labada Nin ayaana ku jira loolan iyo kala gadasho Xildhibaanada Cusub ee lagu wado in lasoo magacaabo kuwaa oo u badan kuwa horey loo sii calaamadeestay.
Shariif Xasan Sheekh Aadan hada waxa uu wadaa Qorsho uu ku doonayo in Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Dib loo dhigo lana soo hormariyo Mida Madaxweynanimo si uu meesha uga Saaro Madaxweyne Sheekh Shariif oo isagu taa badalkeeda wada .
Madaxweyne Sheekh Shariif isagu waxa uu wadaa in marka hore la qabto sidii Caadada aheed Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka isagooan Jagadaas la doonayo nin kasoo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle si uu Daaqada uga baxo Shariif Xasan uuna isku soo shairixin Madaxweyne mar hadii ay beeshiisa qaadatay Gudoomiye Baarlamaan.
Shariif Xasan ayaa isna wada in Gudoomiyaha Baarlamaanka loo doorto nin kasoo jeeda Beelaha Hawiye gaar ahaan raga isaga ku dhaw si ay daaqada uga baxaan Musharixiin badan oo Culees ku haya kana soo jeeda Beelaha Hawiye uu ugu horeeyo Madaxweyne Shariif.
Siyaasadan ayaana hada ah mid labada Dhinac wada ciyaarayaan iyadoona maanta ay soo shaac baxday xoogeeda kadib markii Sheekh Shariif uu kasoo carooday Shirkii Saxiixayaasha Road-mapka kadib markii uu ka warhelay Qorshaa Shariif xasan ayna la wadaan Madax kale oo Dowlada katirsan iyo Agoustine Mahiga.
Dadka u dhuun duleela Siyaasada Soomaaliya ayaa isweediinaya sida ay ku hirgali karto Qorsha uu wato Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku aadan in Baarlamaan Gudoomiye la’aan ah doorttaan Madaxweyne Kadibna la doorto Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Dad badan ayaana ka dhursugaya Loolanka Siyaasadeed ee hada ka dhax bilowday Labada Shariif oo dhoor mar siyaasada isku qabtay iyadoona hada ay tahay tii kama dambeysta aheed ee labada Shariif ku kala hari lahaayeen.
Qolooyinka baara dadka raaca Diyaaradaha Mareeykanka oo la sheegay inay si toos ah u Qafiifeen (Daawo nin Xubintiisa Taranka Qarax lagu tilmaamay)
Tuugo Jalaabiib soo xiratay oo Dhac la yaab leh u geeysatay mid ka mid ah Dukaanada Yurub (Daawo Muuqaal+Warbixin) !